Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅	48
Courage says: KFC ကို တန်းဆီပြီးဝယ်ရတာ၊ ဆိုင်တံခါးကိုပါ ပိတ်ပြီးထားရတာ ဒါမျိုးတွေကို အကြောင်းပြ နိုင်ငံကို မကောင်းပြောနေတာကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ကို မျက်မုန်းကြိုးနေပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်မြို့လုံးမှာမှတစ်ဆိုင် (ပြောရရင် တစ်နိုင်ငံလုံး) ထဲသော ရှိတဲ့ ဒီဆိုင်ကို လူတွေများစွာလာဝယ်ကျတာ မထူးဆန်းဟုထင်သည်။ ၂၄၀ထဲသော ထိုင်ခုံတွေကလဲ handle လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်။ နာမည်ကြီးဆိုင်တွေမှာ စားချင်ရင် ဒီလိုပဲ စောင့်ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား။ ဒါကိုမှ အပြစ်သဘောနဲ့ ရေးသား ပြောဆိုနေကျသူများကို ကျွန်တော် အနေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုကို အပြုသဘော မမြင်နိုင်သူတွေအဖြစ် ရဲရဲ ဝေဖန်မည်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်အမြင်ပြောရရင်တော့ တစ်ရက်လုပ်ခ ကို ဘယ်လောက်ထိ တိုးပေးမယ်လို့ သတ်မှတ်တာထက်
kai says: Kamayut Media
kai says: သတင်းမှန်တယ်ဆို..
kai says: ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
kai says: ဦးမျိုးအောင်(အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှု ဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန)
kai says: China’s Plunging Markets: Retail Investors Stunned by Rout
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီအလုပ်သမားခ ကိစ္စကလည်းနောက်ဆုံးတော့ ဘုရာကြီး ဘဲ နာပါတယ် ဇာတ်လမ်းဆိုက်တော့ မယ်ထင်ပါတယ်။
kai says: RFA Burmese
kai says: Monday, 10 November 2014
kai says: ဦးထွန်းကြည်၊ ဦးခင်ညွှန့် တို့ကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သူ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီပဲယင်းမှာလုပ်ကြံခဲ့တဲ့ သူ၊ လက်ရှိ သမ္မတအပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများကို အထင်မကြီးသူ၊ စာဖတ်နေသူကြီး ကိုတောင် လှည့်စားနိုင်ခဲ့တဲ့ ၀ါရင့်သက်တော်ရှည် ၀န်ကြီးဟောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေကတော့
kai says: လူတယောက်မကျမ်းမာ.. ဒုက္ခတွေ့တာ…သေတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး.. လူအများစုတွေပျော်ကြတာမှာ…အပြစ်ဖြစ်မဖြစ်.. စိစစ်နိုင်ဖို့…
@QUIL@ says: အဘ အူးအောင်တောင်း ကျမ္မာပါဇီ
kai says: “ဦးအောင်သောင်း၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ”
ဇီဇီခင်ဇော် says: နောက်ဆက်တွဲပါခင်ဗျာ..
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ Accounts တော့ ဟက်ခံရပြီလားမသိ ဒေါ်ဇီဇီလေး ရေ့။
kai says: BREAKING NEWS: USPD Fails to Amend Charter
Mike says: ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘိုတို့ အပါအ၀င် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီ ဦးတေဇရဲ့ ဇနီး ဒေါ်သီတာဇော်တို့ သုံးဦးကို အမည်မည်း စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက် လိုက်ကြောင်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဆက်ပြီးချိုးဖောက်နေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အမည်မည်း စာရင်း မှာထပ်တိုးပြီး ထုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့ HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို မအင်ကြင်းနိုင်ကတင်ပြမှာပါ။
kai says: Day of reckoning looms for Michigan cancer doctor
kai says: ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် သူတို့ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် သမ္မတလောင်းတင်မြှောက်ဖို့ကိစ္စ ပြည်သူလက်ခံနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်သွားမယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
kai says: ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီချုပ်က လွှတ်တော်၂ရပ်ထဲ.. ၆၇%နှင့်အထက်မဲ/ခုံ လွှတ်တော်တခုစီအတွက်အနိုင်ရရင်.. ဒုတိယသမ္မတ၂ယောက်တင်ခွင့်ရှိတယ်…။
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်.. ၂၀၁၆မှာ မြန်မာသမ္မတအဖြစ်မြင်ကြရမယ့်သူက.. အပေါ်ကဓာတ်ပုံထဲကတယောက်ယောက်ပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: သဂျီးရေ.. စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ဗျနော့…
အိုဘယ့်.. အိုဘယ့်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ၁၉၉၀ တုံးကလည်း တခါ ထီပေါက်ပြီး..လက်မှတ်ပျောက်…
ဦးစောလိုလူတွေ..တန်းစီနေပြီ… ထင်..။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒီတစ်ခါ မှ သူတို့ ဘဲ အာဏာမြဲ နေရင်တော့ ဒါဟာ လူအများစု တွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ကြောင့် နိုင်ငံ ပျက်နေတာ လို့ ဘဲ ပြောတော့ မယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: မင်းလမ်း ရခိုင်မုန့်တီဆိုင်လည်း တန်းစီရတာပဲ…
kai says: Thant Myint-U added2new photos.
kai says: စီပီယူမှရွှေထုတ်ယူနည်း…
kai says: Eleven Media Group ELEVEN MEDIA GROUP ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏ ယာဉ်အား လူငါးဦးပါဝင်သောအဖွဲ့က ဦးချစ်မောင်လမ်းနှင့် မင်းလမ်းထောင့်တွင် စောင့်ဆိုင်း၍ သေစေနိုင်သော ကုန်းသီးဖြင့် ၂ပေခန့်အကွာမှ အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လုပ်ကြံမှု ညနေ ၆နာရီ ဝန်းကျင်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လုပ်ကြံသူများသည် ယာဉ်ကြောပိတ်မိနေစဉ် တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောမှ အငှါးယာဉ်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းပြီး CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏ ဦးခေါင်းအား အနီးကပ်ချိန်ရွယ် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကားမှန်ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
kai says: ဂဌုန်ဦးစောကို အဲလို.. ချောင်းလုပ်ကြံဖူးတယ်..။
Mike says: News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်) added2new photos.
(Yangon Police) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: “ကျူးလွန်သူအချို့ကို ညတွင်းချင်း ဖမ်းဆီးရမိအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Yangon Police မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ယာဉ်ရှေ့ တံခါးမှန် လေးချက်ထိမှန် အက်ကွဲပြီး ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့လို့ ကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူပေးဖို့ တိုင်ကြားခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့ လေးခွနဲ့ ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တဲ့အမှု ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်။ အခုကိစ္စက လေးခွနဲ့ချောင်းပစ်လို့ အမှုဖွင့်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ လူမြင်ကွင်းမှာ ကြိုတင်ကြံစည်မှုနဲ့ လူသတ်ဖို့အထိ လုပ်ဆောင်တာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ညနေပိုင်းအချိန် လူမြင်ကွင်း လင်းလင်းထင်းထင်းမှာ ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်တာပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့ကို အခုလို လုပ်ကြံဖို့ လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော့ကားကို သိဖို့ ပြန်လေ့ရှိတဲ့လမ်းတွေကို သိဖို့ အချိန်တော်တော်ယူမှ ရလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ ၃ လလောက်ကတည်းက လူမိုက်ဂိုဏ်းတွေနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ လုပ်ကြံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြိုတင်ရရှိထားလို့ ကျွန်တော်တို့ သတိထားပြီး နေခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ကားတစ်စီးတည်းကို ပုံသေစီးလေ့ မရှိပါဘူး။ အခုဟာက လူသတ်ဖို့ ကြံစည်တာပါ။ ကားမှန်မကွဲခဲ့လို့ပါ။ ကားမှန်သာ ကွဲခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သေပြီ။ မနေ့က ကျွန်တော့်ကို လုပ်ကြံတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ ကားစထွက်လာတာကို သတင်းပေးတဲ့သူ၊ ကြိုစောင့်နေတဲ့သူတွေအပြင် ကျွန်တော့်ကားအနောက် ဒါမှမဟုတ် အရှေ့နားမှာ လိုက်ပါပြီးမှ ချိန်သားကိုက် အကွက်ချ လုပ်တဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ အသေသတ် ဆိုပြီး လက်ညှိုးထိုး အော်ဟစ်ပြီး အနီးကပ် ပစ်ကြတာ။ ကားမှန် ခံနေတာကြောင့်ရယ်၊ အပစ်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ ကားကို ညာဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီး လူကလည်း ညာဘက်အခြမ်းကို ထွက်လိုက်နိုင်လို့ အန္တရာယ် မဖြစ်တာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတဆီကို စာပို့အသိပေးသွားပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေဟာ ဘယ်လောက်ထိ အန္တရာယ်ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ဒီဖြစ်စဉ်က သက်သေပါ။ ရန်ကုန်မြို့မှာ နေရာတိုင်း ကားကြပ်နေတယ်။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဘယ်သူ့ကိုမဆို စထွက်လာတဲ့နေရာက စောင့်ပြီး သတင်းပေးမယ်၊ ကားပိတ်မယ့်နေရာမှာ အုပ်စုလိုက် ရန်ရှာပြီး အလွယ်တကူ သတ်ဖြတ် လုပ်ကြံခံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အခုကိစ္စက သာမာန်ဖြစ်စဉ်လို့ မယူဆဘူး။ နောက်ကွယ်က အဓိက ပါဝင်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ သြဇာတိက္ကမ ရှိတဲ့ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ကွယ်က အဓိက လူတွေကို မဖော်ထုတ်နိုင်ဘဲ ကျူးလွန်တဲ့ လူမိုက်တွေကို အရေးယူလိုက်ရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ နောက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ သူတို့ရဲ့ သားသမီး မြေးတွေ မိသားစုဝင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေ၊ ထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ၊ အခြားသော ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့ ဘယ်ပြည်သူမဆို အသက်အန္တရာယ်အတွက် အချိန်မရွေး ခြိမ်းခြောက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကို အဓိက သတိပြုစေချင်တာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လုံခြုံရေးက စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်ဖြစ်စဉ်မှာ မိနစ် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မရောက်လာနိုင်ဘူး။ အားလုံးဟာ လမ်းမပေါ်မှာ လုံးဝစိတ်မချရတော့ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လက်ရဲ ဇက်ရဲ ကျူးလွန်မှုတွေ ဖြစ်လာတာကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ မဟန့်တားနိုင်ဘူးဆိုရင် ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်ဆိုးတွေ ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ဒါပါပဲ။” ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောသည်။
kai says: Nate Silver: Being Black In The US Is About As Perilous As Living In Myanmar
kai says: Foreign students will be banned from working and forced to leave the UK when their course ends
Students told they can only apply forawork visa once they have left By Matt Chorley, Political Editor for MailOnline
မြစပဲရိုး says: တသီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ညိုညိုသင်း NLD မှ ဝင်ပြီး ပြိုင်မယ် လို့ သိလိုက်တယ်။
kai says: China finally says how much gold it has, but nobody believes it
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အခုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်က ဘာယုံလို့ ယုံရမှန်းမသိဖြစ်နေပါတယ်
kai says: လူကုန်ကူးမှုအဆင့် ၂ အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ သတ်မှတ်ခံရ
kai says: Ko Naing
kai says: အမှတ်မမှားရင်.. ဦးနေ၀င်းကိုလည်း.. လူပျံတော်ပတ္တမြားကတယောက်ယောက်က.. .. ရေဆင်ဆိုပြီး ပေးဖူးတယ်..။
ဂဌုန်ဆရာစံကိုတောင် ..ပြေးသတိရမိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: တရုတ်သစ်ခိုးထုတ်သမား ၁၅၀ ကျော်ကို လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နဲ့အတူ လွှတ်ပေး
kai says: တသက်တကျွန်းကျ တရုတ် ၁၅၀ ကျော်ပြန်လွတ်၊ ရှေ့နေဖြစ်သူကို မေးမြန်းချက်
kai says: ၈ရက်ပဲဖမ်းပြီး.. ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာမှာ.. နိုင်ငံရေးကစားကွက်ကတော့ တော်တော်ပါမယ်ထင်တယ်..။
တော်ပါပေ့.. ဘိုချုပ်ကြီးတွေရယ်…။ =
Margin debt on the Chinese stock market has reached $1.2 trillion. ‘We suspect that it’samatter of time before banks may have to face the music,’ Bank of America says Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ဗမာပြည်ရေကြီးမြေပုံ..
kai says: နောင်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်လုပ်ရမလဲ.. အရေးတကြီးပြင်ဆင်သင့်ပြီ..။